Contact UsAbout UsMail for EditorMember Form
HomeNEWSARTICLEPRODUCTSTECHMYSTERYCELEBRITYDOWNLOADLISTINTERVIEW	Mobile CornerPhone Of The WeekEditor's ChoicePeople ChoiceGadgetsReviewKnowledgeHand OutsMobile ShopGame CornerNewsReviewGadgets	Blink Hacker Group မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ၀က်ဘ်ဆိုင် ၂၀၀ ကို Hack လုပ်ထား
မြန်မာနိုင်ငံ၏ Haker Group တစ်ခုဖြစ်သော Blink Hacker Group မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ၀က်ဘ်ဆိုင် ၂၀၀ ကျော်ကို Hack လုပ်ထားကြောင်း Blink Hack...Readmore ငွေကျပ် ၁၀,၀၀၀ ဖြင့် မိုဘိုင်းဖုန်း အင်တာနက်အသုံးပြုရန် လျှောက်ထားနိုင်
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးစာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာနမှ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ မေလ ၇ ရက်နေ့တွင် စတင်၍မို...Readmore ဖုန်းအလုံးရေ ၃ သိန်းကျော်ကို တိုင်းဒေသကြီးများအတွက် ရောင်းချပေးခဲ့
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှာ မေလအထိ စစ်တမ်းကောက်နှုတ်ချက်များအရ တိုင်းဒေသကြီးအားလုံးတွင် ချထားပေးသော ဖုန�...Readmore ဖုန်းနှင့်ကွန်ပျူတာနှစ်မျိုးလုံးတွင် Skype Account တစ်ခုတည်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်
Skype Account တစ် ခုရှိထားရုံဖြင့် နိုင်ငံခြားသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကို ပြည်တွင်း ရှိ နိုင်ငံခြားဖုန်းခေါ်ဆိုမှု ဖွင့် လ�...Readmore TechSpace Journal ၏ အထူးခြားဆုံးဖြစ်သော Online Fun Club Program အစီအစဉ်ပြုလုပ်
TecehSpace နည်းပညာဂျာနယ်၏ အထူးခြားဆုံးသော အစီအစဉ်ဖြစ်သည့် “Online Fun Club Program” အစီအစဉ်တွင် စာဖတ်သူပရိသတ်များကို ကိုယ်တိုင�...Readmore Blink Hacker Group မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ၀က်ဘ်ဆိုင် ၂၀၀ ကို Hack လုပ်ထား မြန်မာနိုင်�...	ငွေကျပ် ၁၀,၀၀၀ ဖြင့် မိုဘိုင်းဖုန်း အင်တာနက်အသုံးပြုရန် လျှောက်ထားနိုင် မြန်မာ့ဆက်သ�...	ဖုန်းအလုံးရေ ၃ သိန်းကျော်ကို တိုင်းဒေသကြီးများအတွက် ရောင်းချပေးခဲ့ မြန်မာ့ဆက်သ�...	ဖုန်းနှင့်ကွန်ပျူတာနှစ်မျိုးလုံးတွင် Skype Account တစ်ခုတည်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည် Skype Account တစ် ခုရ�...	TechSpace Journal ၏ အထူးခြားဆုံးဖြစ်သော Online Fun Club Program အစီအစဉ်ပြုလုပ် TecehSpace နည်းပညာဂ...	Feature of the Week
Intel ရဲ့ စီပီယူမင်းသားသစ် Ivy Bridge
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်လောက်ကတည်းက Intel အနေနဲ့ တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကို “တစ်-တောက်” ပုံစံနဲ့ သွားမယ်လို့ ကြေငြာထားခဲ့တဲ့အတိုင်း အမှန်တကယ်လည်း “တစ်-တောက်” ပုံစံနဲပချီတက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နာရီစက်တွေက “တစ်-တောက်” ဆိုတဲံ စက်သံလေးအတိုင်း အချိန်တွေကို ရွှေ့ပြောင်းလာစေတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တင်စားပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်။
Local	International	Blink Hacker Group မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ၀က်ဘ်ဆိုင် ၂၀၀ ကို Hack လုပ်ထား
ငွေကျပ် ၁၀,၀၀၀ ဖြင့် မိုဘိုင်းဖုန်း အင်တာနက်အသုံးပြုရန် လျှောက်ထားနိုင်
ဖုန်းအလုံးရေ ၃ သိန်းကျော်ကို တိုင်းဒေသကြီးများအတွက် ရောင်းချပေးခဲ့
ဖုန်းနှင့်ကွန်ပျူတာနှစ်မျိုးလုံးတွင် Skype Account တစ်ခုတည်းဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည်
TechSpace Journal ၏ အထူးခြားဆုံးဖြစ်သော Online Fun Club Program အစီအစဉ်ပြုလုပ်
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com	Yahoo အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် စကော့သွမ်ဆင် နုတ်ထွက်
RAV4 EV လျှပ်စစ်ကား တိုယိုတာကုမ္ပဏီထုတ်ဖော်ပြသ
Facebook အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဇတ်ကာဘဂ်က မိုဘိုင်းဈေးကွက်အား ဦးစားပေး ဖော်ဆောင်သွားမည်ဟု ပြောကြား
Google မောင်းသူမဲ့ကားအား နီဗာဒါပြည်နယ် မော်တော်ဌာနမှ လိုင်စင်ထုတ်ပေး
ကမ္ဘာ့ကားရောင်းချမှုစာရင်းတွင် တိုယိုတာ ထိပ်ဆုံးမှ ဦးဆောင်
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com	Yoga
မိုဘိုင်းဖုန်း သန်း ၃၀ စီမံကိန်းနှင့်
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ မိုဘိုင်းဖုန်း သန်း ၃၀ ငါးနှစ်စီမံကိန်းလျာထားချက်၏ ပထမနှစ် လေးသန်းစီမံကိန်း အရ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများတွင် WCDMA နှင့် ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းများကို မတ်လ ၁၄ ရက်မှ စတင်ရောင်းချပေးခဲ့သည်။
ထိုစီမံကိန်းသည် ရည်မှန်းချက်ကြီးမားသောလည်း လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေထ်ာဆောင်မှုပိုင်းတွင် အဆင်ချောမှုများရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။
အထူးသဖြင့် နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးသေးသော ပြည်နယ်များတွင် မိုဘိုင်းဖုန်းများချထားပေးရာ၌ စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးခြင်းနှင့်အတူ မျှော်မှန်းထားသလောက် အရောင်းမတွင်ကျယ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
12345678910	Blink Hacker Group မှ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ၀က်ဘ်ဆိုင် ၂၀၀ ကို Hack လုပ်ထား
Mobitel ၏ Samsung Mobile Shop (Grand Opening) ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်
ဖုန်းဆိုင်အချို့တွင် GSM SIM Card လိုင်းများကို ကြိုတင်ဝယ်ယူမှု ရပ်ဆိုင်း
Cyber City ၏ Samsung Mobile Brand Shop ဖွင့်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်
Copy of Volume-1,Issue-9
12345678910	Yahoo အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် စကော့သွမ်ဆင် နုတ်ထွက်
12345678910	1Gbps အမြန်နှုန်းနဲ့ ဒေတာပို့လွှတ်နိုင်မည့် လေဆာရောင်ခြည်အသုံးပြု ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုစနစ်
မြေပြင်ပေါ်ကို ကျရောက်လာတဲ့ ဥက္ကာခဲ့တွေကို ရှာဖွေမည့် လေသင်္ဘော
ခြေထောက်ကျိုးနေချိန်မှာတောင် ပြေးလွှားနိုင်မယ့် ခြေတု
ကမ္ဘာတစ်ပတ် ခရီးနှင်ခဲ့သော ပထမဆုံးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးသင်္ဘော
Gadgets	Accessories	Facebook Like Box	See Me Here W416 Speaker
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com	UNT-F Distent metes
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com	New Software
Red Gaint Keying Sutie 11 Complete Edition (Windows & MacOSX) For Adobe After Effects
Microsoft Windows7Ultimate (x32/x64) Genuine Bootable (Reup)
Developed By Copyright © 2012 ( May ) - 2012 ( Jun ) TechspaceJournal.Com. All rights reserved.